Ny mpikarakara ny Cisco Engineers dia miankina tanteraka amin'ny CCNA Certification - ITS
Ny mpikarakara ny Cisco Engineers dia miankina tanteraka amin'ny CCNA Certification
Miankina amin'ny fivoaran'ny CCNA ny fanatontosana ny asan'ny Cisco Engineers
CISCO CCNA Training Course & Certification
Fampiofanana Cisco ASA vaovao
Ny indostrian'ny IT dia mihaona hatrany ny fiovan'ny fanovana sy ny fanavaozana izay manosika ny fahaiza-manaony vaovao. Ny fanambarana fiovana tena marina ao amin'ny CISCO fandaharam-pampianarana CCNA dia heverina ho dingana iray amin'ny fanitsiana ny fampiofanana amin'ny fanovana elektronika farany indrindra amin'ny indostria IT.
Ny indostrian'ny IT dia eo amin'ny sisin'ny tsy fahampian'ny fitaovana elektronika. Amin'izao fotoana izao, ny Cisco dia nanolotra fanovàna amin'ny fanamarinana ankapobeny amin'ny ankapobeny, fandaharam-pianarana CCNA an'ny Routing and Switching. Talohan'izay, nasehon'ny injeniera ny lozam-pifaneraserana, ohatra, ny fametrahana ny fitaovana, ny fitaovana fanaraha-maso, ny famolavolana rindrambaiko, ny fanatsarana ny fanatsarana sy ny sisa. Ny fomba fitsaboana fitaovana enti-miasa amin'ny tambazotra iray dia zavatra efa lasa teo amin'ny fotoana izay efa nanapahan'ny andro androany ny fomba fitsaboana haingana. Tamin'izany fomba izany, dia nisy fiovana vitsivitsy notakiana tamin'ny fampiofanana taloha tamin'ny fitadidiana ny tanjona farany mba hahatonga azy io ho sarobidy kokoa amin'ny injeniera amin'izao fotoana izao.
Ny fomba hijanonan'ny fihazakazahana amin'ny fotoana maharitra dia ny tsy hanorina haingam-peo an-tsoratra fa hampidiriny fotsiny ny fisalasalana. Ny vazivazin'ny olombelona dia mety hanosika ny faharetan'ny tambajotra an-tserasera sy ny ezak'izy ireo hikaroka haingana kokoa dia mety haka fotoana tsy misy farany. Ny fampiofanana CCNA amina fanamafisana dia manindry ny fahaiza-manao manan-danja hiatrehana tambajotra iray fa tsy manamboatra fitaovana satria ny ankamaroan'ny asa mifandraika amin'izany dia izao dia mekanisma.
Ny fandaharan'asa vaovao dia mifantoka amin'ny zavatra tena ilaina amin'ny tambajotra azo atokisana, karazana fitarihana samihafa ary ireo fitaovana azo ampiasaina ahafahana manatsara ny SDN. Ny fanamarinana CCNA dia tsy soso-kevitra hanova ny injeniera Cisco ho mpandrindra, fa manantena ny hanampy azy ireo hahatakatra ny tena ilaina. Izy io koa dia manamora ny fandraisana an-tserasera amin'ny rahona sy ny serivisy vita virtualized amin'ny tambajotra. Ny fifindrana amin'ny fahaiza-manao, toy ny programa sy ny siansa momba ny fampahalalam-baovao, dia tokony hihevitra ny mpiara-miofana Cisco ASA. Ireo mpikarakara Cisco dia tokony hampianarina be dia be any amin'ny faritra misy toe-javatra vaovao ary hahita ireo fiofanana momba ny fampiofanana izay namelombelona ny fandaharam-pampianarany.
Raha jerena ny hetsika elektronika vaovao, dia fototra ho an'ny mpamatsy fanofanana mba hifanaraka haingana amin'ny filan'ny fanavaozana ankehitriny. Toy izany koa, manakiana ny injeniera hamelombelona ny fahaiza-manaony ary ny programa CCNA vaovao dia afaka mifehy ny vahoaka amin'ny fomba marina.
Ny fomba fitazonana ny tetikasa amin'ny fotoana
Top CRM Trends ho an'ny 2017 | CRM Training